Dị Egbugbu 2021 - TattooIP.com
Ekike agha ọkara
Ogwe aka ifuru
Azụ nke aka
Nnukwu ogwe aka
N'ọnụ nke ọnwụ
Legskwụ mara mma
Legskwụ dị ogologo
Ahụ dị elu
Uzo di akuku
Nnukwu ịnyịnya ibu
Ara zuru oke
Onye a ma ama
Aha ya bụ Jackson
Nwa nwoke mara mma
Onye isi oche Mao
Ihe nlereanya ụgbọ ala
Nwa agbọghọ na-ezo ihe
Mgbe 90 gasị
Nwatakịrị nwanyị na-ekpo ọkụ
Nkịta tara akpụ
Ugboro abụọ ilo
Mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie
Ugo na-efe efe
Dragọn na-efe efe
Azụ obere ọla edo
Nnụnụ na okooko osisi
Nwa obere Fox
Pusi mara mma
obere nru ububa
Nwa enyí isi
Obere azu shark
nnukwu azu shark
Nnụnụ na-efe efe
Nru ubu bulu
Obere nwa ojii
Nru ububa mara nma
Akwụkwọ eji eji anọ
mkpụrụ osisi peach
acha anụnụ anụnụ Rose
Osisi vaịn ifuru
osisi nke Ndụ
Obere ifuru cherry
Osisi pere mpe
Osisi nwụrụ anwụ
acha odo odo Rose
Omume ndị China
Jiri nwayọ nwayọ
Ifuru ahu English
Akara enweghi ngwụcha
Qitian Dasheng anwụ Wukong
N'ime dragọn ubu
Ebee ka oke osimiri dị?
Lụọ megide Buddha
Nwa na-adịghị ọcha
obere mmụọ ozi
Chineke nke aku na uba
Pluto anwụghị anwụ
Phenix na-enwu enwu
Mụọ mmụọ ozi nwere nku isii
Nwata nwanyị nwụrụ
Mmụọ ozi nke na-eche nche
acha ọbara ọbara
Agba dị egwu
Eze na-adịghị ndụ
Anya nke Chukwu
Aka nke Fatima
Kpụrụkpụrụ ọ .ụ
Ihe oyiyi Buddha
Anya nke ịmara ihe niile
ndị mba ọzọ
Nwa agbọghọ Meri
Puku mpempe akwụkwọ
bara nnukwu uru
Underwa nke dị n'okpuru mmiri
Obere nche anwụ
Ta na akụ
Ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ
Okpueze pere mpe
Sekwa akwa igwe
eserese odida obodo
Hipgbọ mmiri ụgbọ mmiri
karama na-efe efe
Obere ifuru vanilla
Chogbọ mmiri arịlịka
Igwe eji okpukpu
Ọnwa na anyanwụ
Europe na America
Ogu ọbara ọbara
ndị na-abụghị ndị isi
Nke A Na-apụghị .hụ Anya
Sp inking ink
Dị ndị China
Dị Ọdịda Anyanwụ
Ifufe ụlọ akwụkwọ
Onye isi ocha
Nke dị egwu
Aha ya bụ Henna
Japanesedị ndị Japan
Na-enye ume ọhụrụ
Sclọ akwụkwọ ochie
Osisi vaịn Europe na nke America
Anụ ọhịa wolf
Nwatakịrị nwoke edo edo
Obere odo na-acha odo odo
Ziga nnukwu kpakpando
Nwaada mara mma
mpaghara buru ibu
Mọ bu isi
Obere mara mma
Anya nile nke anya
Nnukwu ọnụ ọgụgụ
Onye na-eme Concealer
ntutu dị mkpụmkpụ
dị nro ma mara mma
Nlele zuru oke
Kedu ahịrịokwu ziri ezi “ahụrụ m egbugbu ahụ n'azụ gị” ma ọ bụ “ahụrụ m egbugbu ahụ n'azụ gị”?
\_"N'azụ gị\_" dị ka mmadụ na - elekọta gị dịka m nwetara azụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-ekwu maka ide ma ọ bụ eserese na-abata n'azụ gị dị ka egbugbu,
mgbe ahụ enwere n'azụ gị.
Ọ dị njọ isoro mmadụ mekọrịta ya n'ihi na ha nwere igbu egbugbu?
Naanị n'ihi na ha nwere egbugbu?Eleghị anya,ma ya na chaats.
Ọ bụrụ na egbugbu ahụ bụ ịkpa ókè agbụrụ,ịkpọasị ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ na-akpasu iwe na / ma ọ bụ adịghị mma,ma eleghi anya,dabere na omume ha n’ebe ọ dị.Ha mehiere ihe nzuzo na ha na ak......
Kedu ihe kpatara na agaghị m enweta egbugbu ụlọ mkpọrọ?
Ọ dịghị mgbe ọ bụla m chọrọ igbu egbugbu ma na-agwa onwe m mgbe niile \_"Ana m eche na ọ bụrụ na m enweta otu ọ ga-abụ n'ụlọ mkpọrọ,n'ihi na mgbe ahụ onye na-eche?\_"
Akụkụ nzuzu a kwuru m ogologo oge tupu m nọrọ n'ụlọ mkpọrọ n'ezie ma ọ bụ nweedị e......
Dịka onye na-ese egbugbu, kedụ akụkọ a gbasoro banyere igbu egbugbere ọnụ gị?
Ọ dị mma,darn ya,nke a ga-abụ azịza na-enweghị mwute,maka na achoro m ichedo ihe nzuzo nwoke a dika o kwere mee - ya kwa n'ihi na otutu mgbe,echetachaghị m nkọwa niile.Echetere m iji nye gị azịza ziri ezi (ma bụrụ nke kpachapụrụ anya mee),mana inweta......
Would ga-etinye foto tatuu ma ọ bụ foto?
Nwere ike iri nri mgbe ị na-egbu egbugbu?
Findfọdụ na-ahụ na ọ na-enye aka ị aụ obere nri shuga na ị sugụ mmiri (karịchaa, ogologo oge),a sị na ha nwere nkụda mmụọ ma ọ bụ nkụda mmụọ.Ọbara ọbara gị nwere ike ịda ada ma adrenaline gị kụrụ (ọ bụkwa otu ihe ahụ mgbe ị kụrụ gị) na ịmịkpọ ihe nwe......
Ọ bụrụ n’ị nweta egbugbu ọ ga-abụ?
Enwere m egbugbu,ọ bụkwa kanki a chọrọ mma maka mmiri ozuzo,aha otutu m otutu aka m: aha otutu m bu Raen (akpọ dika mmiri ozuzo),Ọ masịrị m ịgagharị na igwu mmiri mgbe mmiri dị obere,ọ bụkwa ya bụ ihe m nwetara n’udo.A kanji n'ihi na m hụrụ n'anya Ja......
N’aka,kedu ihe mereu2026
You chere na egbugbu aka Jungkook bụ jọrọ njọ?
Mba.O putara na egbugbu ahu di na mkpisi aka ya aka nri?Ọ nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara.Dịka ọmụmaatụ:
ARMY \_u003d Anyị
A na-enweghị n’etiti ahịrị dị ka elu elu V aka nri?(Taehyung)<......
Gịnị ka egbugbu egbugbu pụtara?
Ga-achọpụta na ị nwere ike ịme google okwu akpọrọ Tramp Stamp,ị chọghị?
Ọ bụ egbugbu na nwanyị (n'ozuzu) azụ,na pelvis di elu.
Anụbeghị m okwu a ọtụtụ afọ na-adịbe......
Ọ ga-abụ enweghị nkwanye ùgwù maka onye America nweta egbugbu egbugbu Hawaii?
Adịghị m ala ndị Hawaiian mana ebirila m na Hawai'i ruo ogologo oge iji zaa ajụjụ gị karịa ka azịza ndị ọzọ m gụrụ ndị mmadụ doro anya abụghị ndị obodo Hawai'i..
Ee,Hawai'i bụ steeti dị na USA mana echere m na ị ma nke ahụ.Amaghị m ihe ị na-ekwu s......
Kedu otu ị ga - esi họrọ ihe igbu egbugbu nke ị nwere ntakịrị ohere ịta ụta maka igbu egbugbu?
Ọ bụghị onye ọ bụla na-akwa ụta banyere egbugbu ha nwere.Anaghị m akwa ụta ọ bụla nke m.Agbanyeghị, m wepụtara oge wee chebara akụkụ nke ọ bụla echiche ma nwee ntụkwasị obi na ndị na-ese ihe m ma soro n'ọrụ na-arụsi ọrụ ike.
Nke a bụ ihe ole na ol......
Ebere China (Mfe Bekee)